Shiinaha oo aan laga aqoonin Warshadaha iyo waxsoosaarka Beeraha | ShiningPlast
ShiningPlast sidoo kale waxay diirada saareysaa soosaarka dhir daahir / Dhar dhir muddo sannado ah. Waxay ka dhigtaa dhirtaada diiran oo ay awood u yeelan karto inay si fiican u neefsato. Sidoo kale waxay leedahay heerka awood sare oo ahaanshaha xoogna u leh adeegsiga muddada dheer. 'ShiningPlast nonwoven' wuxuu leeyahay meelayn xitaa fiber ah oo waxaad dareemi kartaa dharka kala duwan.
Hore: Shade Net
Xiga: Bixin La'aan